The Good Detective (2020) – Burmese Subtitle Share
StarringJang Seung-jo, Ji Seung-hyun, Jo Hee-Bong, Jo Jae-yoon, Lee Elijah, Oh Jung-se, Park Geun-hyung, Shin Dong-mi, Son Hyun-joo, Son Jong-hak
Synopsis of The Good Detective (2020)
၂၀၁၅ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၃ ရကျနေ့ မနကျ၃နာရီကွီးမှာ တနျဖိုးကွီးနာရီတဈခုဝတျထားတဲ့လူတဈယောကျက ကောငျမလေးတဈယောကျရဲ့အလောငျးကို တံတားပျေါကနပေဈခလြိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျတမျးဖမျးခံရတဲ့အခါမှာတော့ တကယျ့တရားခံအစဈမဟုတျပဲ လီဒယျခြောဆိုတဲ့သူဖွဈနပွေီး အပွဈမရှိပဲနဲ့ ကွိုးမိနျ့ပေးခံလိုကျရပါတယျ။
ဒီအဖွဈအပကျြတှပွေီးလို့ ငါးနှဈကွာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီအမှုနဲ့ ဆကျစပျဆငျတူတဲ့ကိစ်စတှကေပွနျဖွဈလာပါတော့တယျ။
ဒီလိုကိစ်စတှကေို လီဒယျခြောလူသတျမှုကိုစုံစမျးခဲ့တဲ့ စုံထောကျဂနျဒိုခနျြးနဲ့ ဆိုဘူရဲစခနျးကိုအသဈရောကျလာတဲ့ စုံထောကျဂြီအိုဟြော့တို့က ဘယျလိုကိုငျတှယျဖွရှေငျးကွမှာလဲ?? လှနျခဲ့တဲ့ငါးနှဈကလူသတျမှုရဲ့တရားခံကိုဘယျသူတှကေဖုံးကှယျပေးလိုကျကွတာလဲ?? တကယျ့တရားခံကရောဘယျသူလဲ?? စတာတှကေို စိတျဝငျစားဖှယျမွငျတှရေ့မယျ့ series တဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
ဇာတျဆောငျတှအေနနေဲ့ကတော့ Kdrama fanတှရေငျးနှီးပွီးသားဖွဈတဲ့ မငျးသားကွီး Son HyunJoo က ဂနျဒိုခနျြးအဖွဈပါဝငျထားပွီးတော့ဂြီအိုဟြော့ နရောမှာတော့ Encounter(Boyfriend)ထဲကဒုတိယမငျးသားနရောကနေ စိတျဝငျစားမှုတှရေရှိထားတဲ့ Jang Seung-jo ကသရုပျဆောငျထားပါတယျ။
၂၀၁၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ မနက်၃နာရီကြီးမှာ တန်ဖိုးကြီးနာရီတစ်ခုဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကို တံတားပေါ်ကနေပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာတော့ တကယ့်တရားခံအစစ်မဟုတ်ပဲ လီဒယ်ချောဆိုတဲ့သူဖြစ်နေပြီး အပြစ်မရှိပဲနဲ့ ကြိုးမိန့်ပေးခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေပြီးလို့ ငါးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီအမှုနဲ့ ဆက်စပ်ဆင်တူတဲ့ကိစ္စတွေကပြန်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဒီလိုကိစ္စတွေကို လီဒယ်ချောလူသတ်မှုကိုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ စုံထောက်ဂန်ဒိုချန်းနဲ့ ဆိုဘူရဲစခန်းကိုအသစ်ရောက်လာတဲ့ စုံထောက်ဂျီအိုဟျော့တို့က ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြမှာလဲ?? လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကလူသတ်မှုရဲ့တရားခံကိုဘယ်သူတွေကဖုံးကွယ်ပေးလိုက်ကြတာလဲ?? တကယ့်တရားခံကရောဘယ်သူလဲ?? စတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်တွေ့ရမယ့် series တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ Kdrama fanတွေရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး Son HyunJoo က ဂန်ဒိုချန်းအဖြစ်ပါဝင်ထားပြီးတော့ဂျီအိုဟျော့ နေရာမှာတော့ Encounter(Boyfriend)ထဲကဒုတိယမင်းသားနေရာကနေ စိတ်ဝင်စားမှုတွေရရှိထားတဲ့ Jang Seung-jo ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Episode 1 (988 MB)
GDrive Usersdrive Mshare
Episode2(989 MB)
Episode3(1014 MB)
Episode5(990 MB)
Episode6(0.99 MB)
Episode7(994 MB)
Episode 8 (983 MB)
Episode9(1 GB)
Episode 10 (986 MB)
Episode 11 (0.99 GB)
Episode 12 (0.99 GB)
Episode 13 (1.01 GB)
Episode 14 (1.03 GB)
Episode 15 (1.02 GB)
Episode 16 (1.1 GB)
———————————————————————— End ————————————————————————
All Episodes Zip File – Mshare
ProductionBlossom Story, JTBC Studios
Firt air date2020-07-06
Last air date2020-08-25
Home PageThe Good Detective (2020)
Hanna (2019) Season 1